Nay Ga Bar Myanmar Construction Co.,Ltd | iMyanmarHouse.com
Nay Ga Bar Myanmar Construction Co.,Ltd
ဤကုမ္ပဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/nay-ga-bar-myanmar-construction-company-limited
Nay Ga Bar Myanmar Construction Co.,Ltd မှ ဆောက်လုပ်သော Project များ
Royal Sin Min Condominium
Royal Sin Min Condominium သည် ကမ်းနားလမ်းနှင့် အလုံလမ်း ထောင့်အနီးတွင် တည်ရှိပြီး လူစည်ကားသည့်နေရာ၊ စီးပွားရေးအချက်အချာကျသောနေရာဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြစ်ကမ်းဘေးတွင်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ တန်ခိုးကြီးဘုရားဖြစ်သော ရွှေတိဂုံဘုရားအား နေ့စဉ်ဖူးတွေ့နိုင်ပြီး...
Royal Aung Zay Ya Residence
Royal Aung Zay YaResidence ကိုNo.21 (B-1), Aung Zay Ya Street, Yankin Township, Yangon တွင် Nay Ga Bar Myanmar Construction Co.,Ltd မှတည်ဆောက်ထားပါသည်။ Specification The below specification, by the architect consists inabrief summary of the finishings and parameters guiding this project. Nay Ga Bar Myanmar Consturction Co.,Ltd. Reserves the right to change, modify and build without prior notice. Site Area 6840 sqft (685.64m2) Gross floor Area 4872 sqft(452.62m2) Total Apartments 22 Units Total Car Park 29 Lots Relax Area Recreation Area Bar Gymnasium Bath & W/C Green Space Swimming...
Royal Maung Bamar Residence
Royal Maung Bamar Residence သည် အမှတ် (၁၅/က)၊ ဓမ္မာရုံလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် တွင် Nay Ga Bar Myanmar Construction Co.,Ltd မှ ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။ အင်းယားကန်၊ ပြည်လမ်းမတို့နှင့် ပေ (၁၀၀) ခန့်သာ ဝေးသော ၊ ဓမ္မာရုံလမ်းမပေါ်ရှိ ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွင် တည်ရှိပြီး အင်းယားကန်ေ ရပြင် မှ...
Room(1-F), Royal Sin Min Condo, Corner of Kannar Rd & Ahlone Street.